Faka i-Pinterest Pinit Button ku-WordPress | Martech Zone
Faka i-Pinterest Pinit Button ku-WordPress
NgeSonto, ngoFebhuwari 5, 2012 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 4, 2017 Douglas Karr
Pinterest kukhuphuka ekuthandweni… kangangoba amanye amasayithi okwabelana ngomphakathi aqala ukulahlekelwa okuthile. Ngikholwa ukuthi inzuzo yePinterest ukuthi iyindlela yokubuka ebekwe kahle yokwabelana ngolwazi. Ngenkathi amanye amasayithi enohlu oluyisicefe, i-mozaic ekhiqizwa yiPinterest kulula ukuyiphenya ukuthola ukuthi yini ekuthwebula isithakazelo.
Unalokho engqondweni, amasayithi okwabelana ngomphakathi angabavelisi bezimoto abahle kakhulu, ngakho-ke kungani ungenzi kube lula ukwabelana ngokuqukethwe kwakho? Namuhla, singeze iPinterest Phina inkinobho kungqikimba yethu ye-WordPress. Bekuyinto elula ukuyenza… saze sahlanganisa nokudonsa inkinobho yesithonjana esifakiwe njenge-URL yesithombe.
Uma ungathanda ukuthi kuboniswe isithombe esifakiwe, nayi ikhodi yendikimba yokwengeza inkinobho yePinit kungqikithi yakho ngaphakathi kweLoop:
&media=ID), 'thumbnail' ); echo $thumb['0']; ?>&description=" class="pin-it-button" count-layout="horizontal">Phina
Uma ungafuni ukucacisa isithombe, nansi enye ikhodi:
&description=" class="pin-it-button" count-layout="horizontal">Phina
Futhi - qiniseka ukufaka umbhalo wePinterest kufayela lakho le- footer.php
Ngemininingwane eyengeziwe yokwenza inkinobho yePinit noma ukubheka ezinye izinhlelo zokusebenza nezici, bheka i- Izinto ezihamba phambili zePinterest ikhasi. Abantu baseBuffer nabo bachazile Ungayifaka Kanjani Inkinobho Yokuphina Kwe-Pinterest Kubhulogi Lakho Futhi Vumela Abantu Baphawule Okuthunyelwe Ngezithombe usebenzisa inguqulo yakamuva ye-plugin ye-Digg Digg.
Tags: phinainkinobho yokuphinainkinobho ye-pinterestWordPress
Ihora Usuku Lwezokuxhumana Komphakathi…
Izindlela Ezi-10 Zokukhulisa Ukuthengisa ngo-2012
Feb 7, 2012 ngo-10: 30 AM
Unquma. Ngingahle ngibe mnene kancane kepha leyo yinkinobho yokuqala ethi “Phina” engiyibonile.
Feb 7, 2012 ngo-11: 20 AM
Inyoni yokuqala ithola ithrafikhi!
Ngo-Apr 11, i-2012 ku-11: 05 AM
nvmnd ngikwenzile. Akusebenzi uma ungenayo "isithombe esifakiwe" esethiwe kokuthunyelwe kwakho.
Ngo-Apr 11, i-2012 ku-6: i-55 PM
@ twitter-129525014: disqus, akufanele ihlangane ne-Image Featured, kepha KUDINGA uhlobo oluthile lwesithombe ekhasini.
May 21, 2012 ku-10: 09 AM
ID), 'isithonjana'); echo $ isithupha ['0']; ?>
Ngikukweleta inqwaba yonke yokubonga ngaleli gugu elincane, mnumzane.
Ingivumele ukuthi ngilungise ikhodi ye-ShareThis ezosetshenziswa ku-wordpress (i-ShareThis yinhle kepha iqinisekile ukuthi idinga ukulungisa okuningi ngaphambi kokuthi ibe wusizo).
Uma kwenzeka noma ngubani kwenzeka lokhu esimweni esifanayo nami:
<span class = 'st_pinterest_hcount' displayText = 'Pinterest' st_img = 'ID),' isithonjana '); bhala i- $ thumb ['0 ′]; ?> & incazelo = '>
Faka noma yimaphi amanye ama-bits owadingayo njenge-st_title st_url st_blahblahblah
Ngiyethemba lawa mazwana awacazululwa…
hlela: i-goddammit iyahlukaniswa, lokho kuhle kakhulu. Kungezwe izikhala ezimbalwa nezinsimbi ukuze kubonakale.
May 21, 2012 ku-10: 18 AM
Sawubona empeleni ngisanda kuthola, umzuzu owodwa kamuva, ukuthi ungakwenza ngale ndlela:
(ngaphakathi kwamathegi ekhanda)
<meta property = "og: image" content = "ID), 'isithonjana'); echo $ thumb ['0'];?>” />
i-pinterest bese idonsa isithombe kusuka kule 'opengraph' malarkey. Spiffy!
May 21, 2012 ku-10: 49 AM
@fkypie: disqus Kuhle ukuthi basebenzisa idatha ye-Opengraph! Siyabonga ngokwabelana.
May 21, 2012 ku-10: 51 AM
Ngaphezu kokwamukela. Kumele ngisebenzise ingxenye enhle kakhulu yamahora amabili ngizama ukulungisa lokhu… ngakho-ke ngithemba ukuthi mhlawumbe ngingasiza omunye umuntu ukuba alondoloze isikhashana!
Jun 3, 2012 ku-6: 02 PM
Uhm, ayikwazi ukuthola ibhaluni yekhawunta. Ngilandele izinkomba zakho igxathu negxathu, konke kusebenza kepha ibhaluni eliphikisayo. Noma yimuphi umbono wokuthi ungakulungisa kanjani lokhu?
Jun 3, 2012 ku-6: 20 PM
@ twitter-61936398: disqus Kufanele ube ne-count-layout = "enezingqimba" ukuze ikhawunta ibonakale ngakwesokudla. Uma unalokho okulungile futhi unesakhiwo esifanele, kungenzeka nje ulinde i-pinterest ukuthi ivuselele ukubala. Angikholwa ukuthi bayayibonisa uma ingu-zero.
UJun 4, 2012 ngo-3: 01 AM
Sawubona Douglas, uqinisile impela !!! 🙂 Uma ungenazo izikhonkwane ngakho-ke ikhawunta ikuziro, ngeke ivele eceleni kwenkinobho ethi “Phina”. Ngibeke iphinikhodi yokuyihlola, kwathi lapho ikhawunta ibuyekezelwa ku- “1” yavela eceleni kwenkinobho yayo. Siyabonga ngokusikisela kwakho! 🙂
Mhlawumbe lesi sici kufanele sichazwe ngqo ku-athikili.
UJun 4, 2012 ngo-7: 41 AM
Ngiyethemba abantu bazobona ukuphawula kwakho! 🙂
UJun 21, 2012 ngo-7: 36 AM
Okuhlangenwe nakho kwami ​​nge-pinterest:
Ngisebenzise i-pinterest ukwengeza izinga lesiza sami futhi umphumela waba muhle, usuthuthukile ukusuka ekhasini 6 kuya kwelesi-4 lekhasi le-1 kungakapheli amasonto ama-3.
Ngithole ukuthi umthengisi obizwa nge "pinterest", obekwe kuqala lapho usesha "pinterest" eFiverr, ukhiphe imiphumela emihle kumawebhusayithi wami. Umthengisi ukhonkotha isiza sami nabantu abahlukene abangama-75, angazi ukuthi ukwenze kanjani lokhu, kepha kuthuthukise izinga lami le-SERP. Ngizamile abanye abathengisi aba-5 abanikela ngama-pinterest gigs kuFiverr kepha abakwazi ukuthuthukisa izinga lesiza sami. Angazi ukuthi kungani.
Ngemuva kokusebenzisa i-pinterest ye-SEO isikhathi esithile, ngithole ezinye izinzuzo zayo:
- IGoogle iyathanda isignali yemidiya yokuxhumana nabantu.
- Iphini ngalinye libhekwa njengezixhumanisi ezi-3 ezingenayo.
- Izixhumanisi nezithombe ezivela ku-pinterest ziyalandelwa.
- Khumbula ukufaka izixhumanisi zezikhonkwane ukuze ukhonjiswe yiGoogle.
Dec 15, 2015 ngo-9: 41 PM
Njenge-blogger ngisebenzisa i-pinterest yokwengeza isikhundla sesiza sami futhi umphumela waba muhle, ithuthukise amakhasi ami. Siyabonga ngalokhu okuthunyelwe okufundisayo! 🙂